Japan နိုင်ငံ MEXT(Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology ) မှ ပေးအပ်သော အောက်ပါ Scholarship Program များအတွက် စိတ်ပါဝင်စားသူများ လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
1. Research Students (ASJA recommendation)
April 23, 2018 (Monday) မှ May 11, 2018 (Friday) အထိ ရုံးချိန်အတွင်းလာရောက်လျှောက်ထား နိုင်ပါသည်။
မေလ ၁၁ ရက်နေ့ နောက်ပိုင်းတွင် MAJA ၏ Facebook Page တွင်ကြော်ငြာပေးထားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျောင်းသူ / ကျောင်းသား တစ်ဦးချင်းစီ Phone ဆက်အကြောင်းကြားပေးမည်မဟုတ်ပါ။
(၁) ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျို အနီးတ၀ိုက်တွင်ရှိသော University တွင် လျှောက်ထားသူဖြစ်ရပါမည်။
(၂) ASJA ၏ Activities များတွင် ပါဝင်နိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။
(၃) JASSO မှဖွင့်လှစ်ထားသော တိုကျို မြို့ရှိ ဂျပန်ဘာသာသင်တန်းကျောင်းတွင် ၆ လ ကြာ တက်ရောက်နိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။
1. Research Students (ASJA recommendation) အတွက်လိုအပ်ချက်များ
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို http://www.mm.emb-japan.go.jp/…/english/J-Gov%20Scholar%202… ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
(2) Age: Applicants, in principle, must have been born on or after April 2, 1984.
(6) In principle, the Applicants must not be Government employee.
အထက်အကြောင်းအရာပါ အချက်အလက်များနှင့် ကိုက်ညီင်္သဖြင့် လျှောက်ထားလိုသူများသည်
(၁) Application Form ( MAJAရုံးခန်းတွင်လာရောက်ထုတ်ယူရန်/ပေးထားသော Link တွင်လည်း Download ၍ ယူနိုင်ပါသည်)
(၂) လျှောက်လွှာ မိတ္တူ(၁)စုံ
(၃) ပညာအရည်အချင်းအထောက်အထားနှင့် တကွ အမှတ်စာရင်း
(၄) MAJA အသင်းသားတစ်ဦး၏ ထောက်ခံစာ
(၅) ဓါတ်ပုံ(1)ပုံ ( 3cm x 4cm )
(၆) ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာနှင့် တယ်လီဖုန်းအပြည့်အစုံ
တို့နှင့် တကွ MAJAရုံးခန်းသို့ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ မေလ(၁၁)ရက် ၊ ညနေ (၄း၃၀)ထက်နောက်မကျဘဲလူကိုယ်တိုင် လာရောက် လျောက်ထားရပါမည်။ စာတိုက်မှတစ်ဆင့် ပေးပို့လာသောလျှောက်လွှာများအား လက်ခံစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ အတည်ဖြစ်သောရွေးချယ်မှုကို မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်သံရုံးကပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါကMAJAရုံးခန်းသို့ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ် ၀၉-၂၆၂၆၀၂၁၂၁ ၊ ၀၉-၄၂၈၆၁၂၁၅၁၊ သို့ ဖြစ်စေရုံးချိန်အတွင်းဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ပါ link တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။